मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँट, २ जना भाग्यमानीले पाए ११ कित्ता शेयर |
मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँट, २ जना भाग्यमानीले पाए ११ कित्ता शेयर
काठमाडौं २८ असार २०७८। मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओ बाँडफाँट भएको छ । असार २५ गते शुक्रवार प्रि–अलोटमेण्ट गरेको कम्पनीको आईपीओको अन्तिम बाँडफाँट सोमवार विहान भएको हो ।
कम्पनीको पहिलो शेयर कारोबारका लागि प्रतिकित्ता रू. ११० दशमलव ८४ देखि रू. ३३२ दशमलव ५२ सम्मको मूल्य रेञ्ज पाउने देखिन्छ । वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थ देखि तीन गुणासम्मको मूल्यरेञ्ज पहिलो कारोबारका लागि नेप्सेले तोक्ने व्यवस्था छ । गत आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ सम्ममा रू. २ करोड ९६ लाख ७६ हजार खुद नाफा गरेको कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ६ दशमलव ८५ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ११० दशमलव ८४ रहेको छ ।